HABAB LAGA HELO Password Wi-Fi
iPhone ayaa Saaxiibka dhow maalmahan, iyo waxaan u baahan nahay in ay online in noo updated. Laakiin marka aad bay uga kacday aad joogto ah zone Wi-Fi si sir ah ilaaliyo network Wi-Fi, waxaa laga yaabaa inaad in aan loo oggolaan in ay helaan xiriir. Laakiin weli waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah Chine ee iPhone iyo xataa jailbroken iPhone a aad u heli kartid si aad u gashid ah oo xidhiidh la ogalayn Wi-Fi lagu soo helo furaha. Faaidaysan Cydis aad bay faa'iido kiiskan. Halkan, habka raadinta ee Wi-Fi password on jailbroken iPhone iyo barnaamijyadooda kale oo waxtar leh, si shaqooyinkaasi waa kuwan halkan wada hadleen.
Sida loo Helo Wi-Fi Password on jailbroken iPhone
Halkan taxane ah tilmaamaha la siiyaa si aad u hesho Wi-Fi password on jailbroken iPhone. Mid ka mid ah si fudud u raaci karaan edbinta loo sameeyo si fiican u siday in habka ugu fudud.
Talaabada 1: Tag Cydia oo baadhaan oo isticmaalaya "WiFi Passwords". WiFi Passwords waa app cabsado oo lacag la'aan ah Cydia, oo waxaa loo isticmaalaa in la helo password Wi-Fi. Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay in aad ku darto ilo wareedyo ku sugan Cydia si aad u hesho barnaamijyadooda qaar ka mid ah (i. Liiska E. hoose ayaa ka mid ah barnaamijyadooda waxtar leh). Markaas ka hor baaritaanka
Open Cydia iyo doortaan Maamul ay u tagaan oo ay u Ilo oo ka jaftaa menu Edit ku darto ilo cusub (ie http://iwazowski.com/repo/ u barnaamijyadooda hoos ku qoran.).
Talaabada 2: Haddaba waad arki "rakib" karaa geeska kore ee midig ee shaashada oo ka jaftaa ku yaal si loo soo dajiyo app.
Talaabada 3: Hadda ka dib markii uu soo dhameystay habka loo rakibo tuubada on "noqo Cydia" oo ka jaftaa badhanka Home ah.
Talaabada 4: shaashadda Home ah, waxaad ka heli kartaa WiFi Passwords in lagu xiro. Hadda riix icon WiFi Passwords ah si aad u furto.
Talaabada 5: Ka dib markii socda app, waxaad ka arki kartaa liiska laga heli karaa Wi-Fi goobaha iyo password in la heli karaa si ay u password ilaaliyo goobaha Wi-Fi. Waxay ku tusi doonaa goobta ay suuragal tahay oo dhan waa la sirta ah ka heli kartaa. Ma aad ku xidhan karto mid ka mid ah liiska ay u isticmaalaan internet ka.
In kastoo halkan WiFi Passwords ayaa lagaga wada hadlay helo password Wi-Fi, laakiin waxaad isticmaali kartaa barnaamijyadooda kale ka mid ah liiska hoos ku qoran oo la raaco tilmaamaha kor ku xusan si aad u hesho password Wi-Fi on iPhone.
List of Top 5 Apps u iPhone Helo Wi-Fi Password on iPhone
1.iWep PRO: Free (Cydia); Price: 5.50 Euros
Waxaa ugu fiican in ay category si aad u hubiso ka password Wi-Fi ilaa helitaanka saxda ah iyo sida ugu fiican mid ka mid ah.
Fur "Cydia" >> Maamul >> Ilo >> Edit >> Ku dar ( http://iwazowski.com/repo/ )
Search (PRO iWep) >> Download >> Ku rakib.
Wixii Best Working Download ee "iWep Dictonaries PRO": Search (PRO iWep) >> Download (iWep Dictonaries PRO 2012, iWep Dictonaries PRO 2011, iwm)
macruufka Shuruudaha: macruufka 5 ama ka hor versions of macruufka.
Mid aad u fudud in ay la tacaalaan iyo natiijada ugu wanaagsan.
macruufka 5, macruufka 3 waxaa lagu taageeray.
Dad badan oo shabakadaha taageeray. tusaale ahaan shabakadaha ka Thomson router, router D-Link, router Alice, Fastweb router, Ya.com router, iwm
Sidee u shaqayso:
1.Tap on iWep icon PRO >> Start Scanning >> Hubi Available dhow Wi-Fi Networks la sirta kala duwan >> tusiya u xiridda in Network macquulka ah.
2.iSpeedTouchpad: FREE (Cydia)
Raac edbinta kala soo bixi: Search (iSpeedTouched) ee Cydia >> Download >> Ku rakib. Rainbow Table ka "Shaxan" menu furitaanka app ee loo baahan yahay in sidoo kale kala soo bixi. Easy in ay isticmaalaan iyo macruufka 3 taageeray. Sawirka shabakad kasta oo macquul ah oo ay muujiyaan u xidhiidhinaya network suurto gal ah in password waa la heli karaa.
3.Speedssid: Free (Cydia), Price: 5 Euros
Raac inaad kala soo baxdo ka Cydia: Search (Speedssid) >> Download >> Ku rakib. App Tani waa ka publisher la mid ah PRO iWep oo ka shaqeeya la mid ah. Sidoo kale, waxa loo isticmaali karaa shabakadda taas oo ka mid ah oo kala duwan.
4.Dlssid: Free (Cydia), Price: 5.50 Euros
Waa app kale ka publisher ee iWep Pro oo ka heli kartaa lambarka sirta ah ee Wi-Fi in Dlink router wireless. Waxaa ka shaqeeya sidii iWep Pro, oo waxaad geli kartaa cinwaanka Mac ee shabakada u helo password.
5.WLAN Audit: Free (Cydia)
Waxaa ka shaqeeya sida kuwa kor ku xusan. Laakiin taageerada router way kala duwan yihiin. Waxaa ka heli kartaa WiFiXXXXXX, WLANXXXXXX, iyo router YACOMXXXXXX si aad u hesho lambarka sirta oo waxaa la helay in Spain.
Top 10 Best CD iyo DVD gubidda
Sidee inuu ka soo kabsado Messages tirtiray ka 5S iPhone ah
Sida loo Undelete iPhone ee kaabta faylasha
> Resource > iPhone > HABAB LAGA HELO Wi-FIPASSWORD